Iwu Nchedo General Data (GDPR) | Law & More
N'oge a, iwu nzuzo na-enwe mgbanwe dị mkpa nke na-esite na mmejuputa GDPR. Site na nguzobe GDPR, European Union dum ga-edobere iwu nke nzuzo. Nke a na - emetụta ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na ha ga - emerịrị ihe chọrọ ihe gbasara nchedo data. GDPR kwalite onodu nke ihe omuma banyere data site na inye ha ikike ohuru na iwusi ikike ha ike. Ọzọkwa, òtù ndị na-ahazi data nke onwe ga-enwe ọtụtụ ọrụ. Ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ijikere maka mgbanwe a, karịa karịa ebe ọ bụ na ntaramahụhụ maka nrube isi na GDPR ga-abụkwa ihe siri ike.
nsogbu onye ahịa ahụ ”
mr. Tom Meevis, onye mgbasa ozi na Law & More - [Email na-echebe]
mr. Maxim Hodak, onye nkwado na & More - [Email na-echebe]